सैफ अली खानकी छोरी सारालाई झट्का ! के हो कारण ?
Tue, Jun 2, 2020 at 6:10pm
सबैभन्दा चर्चित स्टारकिड्स साराको डेब्यू फिल्म ‘केदारनाथ’ संकटमा परेको छ
बिहिवार, ३ फागुन २०७४,	आहाखबर	2.08K
एजेन्सी~ काठमाडौं, ३ फागुन ।
बलिउड अभिनेता सैफ अली खानकी छोरी साराको सौन्दर्यको खुबै चर्चा हुनेगरेको छ । उन्ले बलिउडमा फिल्म ‘केदारनाथ’बाट डेब्यू गर्दैछिन् । तर सबैभन्दा चर्चित स्टारकिड्स साराको डेब्यू फिल्म ‘केदारनाथ’ संकटमा परेको छ । फिल्मका निर्माता र निर्देशबीच मनमुटाब सुरू भएको बताइएको छ । जसका कारण साराको बलिउड यात्रामा धक्का लाग्न सक्छ । निर्माता र निर्देशकबीच विवाद बढेपछि फिल्मको सुटिङ रोकिएको र सारा तनावमा रहेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।
यस फिल्मका निर्देशक अभिषेक कपूरले फिल्मका अन्य सदस्यलाई जानकारी नै नदिएर फिल्मको प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरेपछि विवाद भएको हो । उनले फिल्मको पोष्टरमा फिल्मको प्रदर्शन मिति २१ डिसेम्बर २०१८ लेखेका थिए । निर्देशक कपूरले प्रोडक्शन हाउससँग यसरी बिना कुनै सहमति फिल्म प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरेपछि यस फिल्मका निर्माताले फिल्मको छायांकनलाई रोकिदिएका छन् । फिल्ममा सारा र सुशान्त सिंह राजपुतको मुख्य भूमिका छ ।